Straw Hat Pirates (麦わら海賊団 Mugiwara Kaizokudan?) ဟာ One Piece series မှာ အဓိကဇာတ်ကောင်တွေ ဖြစ်ပြီး Monkey D. Luffy က အဓိက ဇာတ်ဆောင်အဖြစ် ပါ၀င်ပါတယ် ။"Straw Hats" ဆိုတာကတော့ Luffy ရဲ့အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ ကောက်ရိုးဦးထုပ်လေးကို ကိုယ်စားပြုသလို တစ်ခါတစ်ရံ "Luffy Pirates" တွေကိုလည်း Series အစောပိုင်းမှာ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ Luffyရဲ့ ကောက်ရိုးဦးထုပ်လေးကတော့ Red-Haired Shanks က Luffy ငယ်စဉ်မှာ ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Water7Arc အထိသူတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး တရားဝင် သင်္ဘောကတော့ "Going Merry" (ゴーイング・メリー号 Gōingu Merī-gō?,) ဖြစ်ပြီး Enies Lobby Arc အပြီးမှာတော "Thousand Sunny" (サウザンドサニー号 Sauzando Sanī-gō?) လို့ခေါ်တဲ့ သင်္ဘောအသစ်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။Straw Hat Pirates မှာ အဖွဲ့ဝင် (၉) ဦးရှိပြီး သူတို့အားလုံးရဲ့ ဆုကြေးစုစုပေါင်းဟာတော့ 800,000,050 ရှိပါတယ်။ Sabaody Archipelago အဖြစ်အပျက်အပြီးမှာတော့ သူတို့အဖွဲ့ဝင် (၉) ဦးဟာ တစ်ကွဲတစ်ပြားဖြစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ သူတို့ဟာ အဲဒီလိုကွဲပြားနေတဲ့ (၂) နှစ်အတွင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ကူညီကြဖို့ အပြင်းအထန်ကို လေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ (၂) နှစ်အတွင်းမှာတော့ Great Pirate Era ဟာ Whitebeard သေဆုံးမှုနဲ့အတူ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ သူတို့ဟာ မကြာခင်မှာ Sabaody Archipelago မှာပြန်လည်စုစည်းကြမှာဖြစ်ပြီး အခုချိန်မှာတော့ Fishman Island မှာတကွဲတပြားဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
East Blue: Straw Hat Pirates • Roger Pirates • Alvida Pirates • Buggy Pirates • Usopp Pirates • Black Cat Pirates • Don Krieg's Pirate Armada • Yes Pirates • Tulip Pirates • Spade Pirates • Bluejam Pirates
West Blue: Rumbar Pirates • Firetank Pirates
South Blue: Bonney Pirates • Kid Pirates
Grand Line: Giant Pirate Warrior Band • Wapol Pirates • Saruyama Alliance • Foxy Pirates • Fallen Monk Pirates • On Air Pirates • Golden Lion Pirates • Impostor Straw Hat Pirates • Caribou Pirates
New World: Arlong Pirates • Macro Pirates • Rolling Pirates • Maelstrom Spider Pirates • New Fishman Pirates
Shichibukai: Sunny Pirates • Baroque Works • Thriller Bark • Kuja Pirates • Blackbeard Pirates
Yonkou: Red Hair Pirates • Whitebeard Pirates
Unknown: Cook Pirates • Roshio Pirates • Hokahoka Pirates • Eraser Pirates • Fanged Toad Pirates • Big Helmet Pirates • Acumate Pirates • Candy Pirates • Space Pirates
Non-Canon: Ganzack Pirates • Crescent Moon Pirates • Trump Siblings • Barbar Pirates • Zenny Pirates • Whetton Pirates • Pumpkin Pirates • Gasparde Pirates • Bayan Pirates • Teacup Pirates • Moustache Pirates • Red Arrow Pirates • Phoenix Pirates • Amigo Pirates
"https://onepiece.fandom.com/my/wiki/Straw_Hat_Pirates?oldid=143" မှ ရယူရန်